Azithandeki - Inxalenye 21 | Apg29
Azithandeki - Inxalenye 21
My waqhubeka neshukumayo ibali njengoko nkwenkwana ezingafunekiyo.
Umntakwethu foster Stig ukuba kuqinisekiswe Annerstads icawa kwiminyaka emine ngaphambili. Ndingazikhumbuli yokuqinisekisa yakhe kodwa wayefuna ukuqinisekisa kum. Isizathu sokuba Stig kuqinisekiswa ngokwayo andazi kodwa ndandifuna kuqinisekiswa, kungekhona ukufumana izipho ezithile kunokwenzeka, kodwa kwaba nje ngenxa umdla wokwenene kum.
Xa ndikhangela emva ebomini bam, ndiyayiqonda into yokuba umdla yam isiqinisekiso kwaba ngenxa uphendlo ukunyaniseka olunzulu kuThixo. Kukho aye ohlulwa entliziyweni yam.
ukufundisa Ukuqinisekiswa esilungiselelwa Annerstads ibandla ebanjwe yi umfundisi. Ukufundisa waba igumbi kumgangatho wesibini wendlu Parish. Saba mhlawumbi-20 abantu abatsha abafana namantombazana abafunda.
Kodwa ndafumanisa ukuba izifundo yokuqinisekisa zazinzima kunye ezinzima. Wayesele Thina ukufunda ngokuvakalayo incwadi malunga ukholo lwamaKristu ukuba mna andizange ukuqonda nto. Ndikhumbula nto namhlanje ngoko wafundiswa ukuba kuthi weCawa. Mhlawumbi andithanga ndikukhumbule nokuba kuyo ngomhla nesiqinisekiso, iselithwasile nenyanga ngosuku phambi lokuzalwa kwam.
Kodwa ke isiqinisekiso hlobo akwazi ukuguqula okanye kuchaphazela njengomntu. Nangoku ke Chris nendala. Oku kwaba yi isiganeko nje ngaphambi kokuba ukuya ecaweni uze uqinisekise nathi. Umbingeleli zonke weCawa sasihlanganisene kwigumbi elincinane ngaphambi isiqinisekiso.
Xa ndicela ukuya kwigumbi langasese, yaye ndenjenjalo. Xa ebuya, ndandihlamba amanzi phezu chemise emhlophe, zonke bar weCawa, ndakuba wahlamba izandla zakhe. Umntu wabonisa oku ngaphandle, kodwa ndacinga ukuba ivalwe lilo xa la, ngoko wayifaka expletive elungileyo elikhulu phambi umbingeleli lonke weCawa. Umphathiswa wabonisa amazwi am kakubi abanyulwa, yaye Ndothuka pionröd ebusweni bam. Kodwa njengoko waya ibandla kunye Uqinisekiso wegqitha ngaphandle nayiphi na ingxaki.
Xa bangena ebandleni wazolula mna ngokuzingca ngayo iBhayibhile kunye nencwadi zecawa. Kodwa uthe ntoni ngexesha isiqinisekiso, mna bengenalo nofifi.
Ndicinga umdla wam wokwenene isiqinisekiso kukuba uThixo wayefuna nam. Kwakhona yaba kwakubonisa ukuba wambongoza uThixo ebudaleni bam. Kodwa andizange ndandisazi ukuba unguThixo.
Xa ndikhangela emva ebomini bam; ndibona ezinye iziganeko xa uThixo wayefuna nam. Kusenokwenzeka ukuba iziganeko nezingathi zincinci, endithe kuwe, malunga ethile incwadi indenna, kodwa kubekho ezinye zeziganeko yabengezela ngequbuliso ukuba uThixo ukho yaye wandibona.
Kamva, mna oqonda ukuba uThixo wayengenguye uThixo Santa Claus ezazifuna ukuba ukunika naziphi izipho ukuba wayengazange ububele, kodwa uThixo waba Ngothando enkulu kuba indoda encinane. Lo uThixo onothando wanika ixesha nexesha kwaye uzive kancinane usaman inkwenkwe bayakugezela ngezwi elingaqondakaliyo, kodwa wayengazi ukuba ngubani na ukuba ke unkqonkqozile emnyango intliziyo yakhe mfana
Ndandineminyaka eliqela kamva ukuba umbingeleli ngaphambili kube frikyrkopastor. Ngoko ke kufanele ukuba babeyazi ukuba zisindiswe njani kwaye ngumKristu, kodwa akazange athi oku kuthi. Kuthekani ukuba bewenzile. Emva koko ndibe sele lugciniwe kwaye wafumana ubomi bam bonke siguqulwe. umvandedwa abaninzi neentsizi ngaba kwakusetyenziswe ebomini bam. Kuyavunywa ukuba, ukuba wacaphula indinyana emangalisayo yeBhayibhile Yohane 3 no-16 ka biblars lethu. Okubhalwe kule vesi:
"Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama wakhe okuphela uNyana, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade."
yena kodwa wacaphula ukuba ivesi eBhayibhileni, ndiye ndaphawula de kweminyaka eliqela kamva, waye yena waxelela okanye echaza le ndinyana ukuze kuthi. Uqinisekiso kwaba njalo akufunekanga ndisindise.
Ekukhuleni kwam, oko maxa wambi ubona ebumnyameni sikhumbuzo kaThixo. Andizange ukuqonda ngoko, kodwa xa ndandineminyaka eliqela kamva ngokubujongela kude yaye ndikhangela emva ebomini bam, ndibe ndiyibone ngokucacileyo.
Loo nto angaya ngqo entliziyweni kwam iiposta nsturmotiv entle. Umzekelo, kukho ilanga emva imithi. Kwaye isibhalo. Mna maxa wambi kuza lonke iipowusta ezinjalo, umzekelo, kwiholo kumarhamente le. Xa ufunda le vesi yeBhayibhile phezu kwabo, ndibe wamangaliswa ukuba namandla bunokugcina. Behla bona besaphilile yaye akwazi ukuthetha entliziyweni yam. Ndikhumbula kakuhle ngesinye isikhathi indlela kumangaliswa, bamangaliswa ujonge le powusta. Kwathi izihlandlo eziliqela yaye izihlandlo ezahlukeneyo ukuba uThixo wathetha nam waza wenza ngokwayo ezaziwayo ezi ngeendlela ezahlukeneyo. Kodwa andizange wayesazi ukuba nguye de kwiminyaka emininzi kamva.
Ingrid Ljunggren waba izifundo kunene kuluhlu zemfundo. Amaxesha amaninzi, wandixelela izinto self-babonwa. Kwaba lula ukuba ukumamela kuye aze angenise oko wathi yena wafundisa.
Ngesinye isihlandlo kwi inkolo, andiyi kuzilibala naphakade. Andazi ukuba ngumKrestu, kodwa wandixelela ukuba yena zakhe iintsana ezisanda kuzalwa indoda eyayiwe yagula esibhedlele. Ke wathandaza kuThixo ngenxa yabantwana babo baphatheka okulungileyo. Bafumana iimpendulo umthandazo. Le wandixelela yonke iklasi. Ndahlala ngokuzolileyo waphulaphula manga kule desika yam.
Esi sikolo lifakwe ukuba siza prya wazalwa konyaka kwiindawo ezahlukeneyo ukuze ufumane ukubona kwihlabathi lomsebenzi yaye mhlawumbi ufumana hum oko besiya azikhethele kwibakala lesithoba, leyo limiswe nzima kakhulu ukwazi. Ekubeni mna ngobugcisa unomdla Ndakha prya ivenkile isebe Tempo e Ljungby njenge decorator. Kwakufuneka abasebenzi babo abahombisa abakhe wenza imiqondiso. Ngelishwa, ndandimthanda oko kuhle yaye kwaba nzima ukuba uthathe inyathelo lokuqala. Mhlawumbi ngenxa yokuba indlela yam usaman nezingenasiqinisekiso.
Ngenxa umrhumo wam nomdla ubuciko intetho lomnye zesiqingatha sonyaka ukuba ndiza kufumana prya iveki kumgca uvavanyo kwikholeji umKristu Helsingborg. Psyokonsulenten wakwazi ukufumana nam apho ngeveki. Ndikhumbula Kwafuneka kukhwela ibhasi wehla waya Helsingborg, nangona ndandinexhala malunga uhambo lwam olude, kodwa wahamba kakuhle, baza ke ngoko utitshala evela esikolweni waza wathatha nam up. Ndandihlala ekhaya kunye nentsapho yakhe.
Ndaqonda ukuba ngamaKristu, kodwa mna bendingazi ukuba ithetha ukuthini. Kwaye bona wamchazela nantoni na malunga noku kum.
Ubusuku ekholejini, ndimi neqela labafundi kunye wabukela ezinye abadlali bebhola. Xa ndabuza omnye wabo ukuba le sikolo yobuKristu. Ke ndibe yinkcazo elide kwakhe apho alunakubaiswa amaKristu. Mna kwindawo lamaKristu, kodwa akazange ayive into ngoYesu. kufutshane kangaka kodwa ngoko kude ...
Ekhaya ikhuliswa ekhayeni lam, ndafumana emhlophe uGidiyon iBhayibhile encinane into ethe khotsho ezantsi kwi kwikhabhathi kwi zegumbi eliphezulu. Andazi ngubani Beyamkele ke. Mhlawumbi ke umzalwana wam awuqeshelweyo. Andikhumbuli ukuba zam. Mhlawumbi umzalwana wam bayifumana xa godeonierna behambisa iTestamente Entsha kwiklasi yesikolo kokuba ebengene. Gidroniter nabizelwa kunika iiBhayibhile phakathi snmst ezikolweni kunye namagumbi hotele nasezintolongweni. Abeyithimbile igama emva kokuba uGidiyon kwiTestamente eNdala.
Ndandilele esofeni nemnyama zegumbi ngokufunda. Yaba esofeni ndahlala xa iphephandaba lasekuhlaleni yaba ibali ngam neekhathuni yam kwiminyaka embalwa ngaphambili.
Ndaqalisa ukufunda kwiVangeli kaMateyu waza yasha kanye nje koko ukufunda. Kuya kuba mnandi ngayo! Andikwazanga ayeke.
Ukufunda ngoYesu nendlela emnqamlezweni, ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo ngomhla wesithathu. Esi siganeko yonke omkhulu zipeyintwe phezulu engqondweni yam ndandibona ngokwenene.
La mazwi eziphilileyo, njengoko ndenze ukufunda. Badibana tye entliziyweni yam. Akuzange ibali nje eqhelekileyo.
Icandelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Vecka 17, onsdag 24 april 2019 kl. 03:52